Ndozvakaitawo matemplate matsva uye ekuwedzera eLibreOffice | Linux Vakapindwa muropa
Aya ndiwo maratidziro matsva uye mawedzero ari e LibreOffice
Iyo Gwaro Sisekelo ichangobva kuzivisa kuburitswa kwekuwedzeredzwa kutsva uye matemplate, yakakwana kuzadzisa iyo nyowani interface MUFFIN iyo ichasvika pakupera kwemwedzi wemwedzi unouya.
Izvi zvinowedzera shanda semubatsiri kune yekutanga LibreOffice, inotitendera kuti tiwedzere zvechinyakare kushanda kwechirongwa, kuchichiita kuti chiwedzere kushanda. Kana ari matemplate, ivo vane basa rekupa hunyanzvi uye kubata kwekubata kumagwaro ako.
Zvinotaridza kuti vanhu veThe Document Foundation vafunga kuzivisa nhau dzavo dzese kamwechete, kubvira kutanga vazivisa yavo nyowani interface uye ipapo ivo vakazivisa iwo matsva ekuwedzera uye matemplate kwatiri. Pasina kupokana, chipo chikuru cheKisimusi chevashandisi vese vechirongwa ichi.
Parizvino pane anodarika mazana matatu matemplate anowanikwa uye anopfuura makumi matatu nemakumi mapfumbamwe ekuwedzera mapurojekiti, aine huwandu hwese mazana masere nemakumi masere. Zvakanakisa pane zvese, zvakagadzirwa nevashandisi venharaunda ivo pachavo, saka tichawana zvirinani zvese.
Tine kubva kuduramazwi muSpanish, kusvika kune Google Drive faira yekunze, kuburikidza nemifananidzo yemifananidzo uye mafaira ekushandura. Kana iwe uchida kurodha pasi yekuwedzera kune yako LibreOffice, iwe unofanirwa kuzviita kuburikidza neino peji, umo mawedzero ese akaiswa pawebhu peji anoonekwa.
Nezve matemplate, tichava nematemplate ekuti titangezve, kugadzira fakisi kana kunyange tsika templates kugadzira invoice. Kuti utore template yeLibreOffice, unofanirwa kuzviita kuburikidza iri rimwe peji.
Kana panzvimbo iwe unoda kupa chimwe chinhu kunharaunda ino, unogona gadzira account pane ino webhusaiti kurodha zvese zvetsika matemplate uye ekuwedzera.
Chaizvoizvo tsananguro yakanaka ye chikamu cheVakasununguka Hofisi vanogadzira uye mubairo wekunyaradza kune avo vasina kukwidziridzwa nemafuta eKisimusi nhasi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Aya ndiwo maratidziro matsva uye mawedzero ari e LibreOffice
Uku kuwedzera kwakanaka kwazvo, kunyanya kune vanhu vanondifarira vanoshandisa libreoffice. Asi kuderera kwacho hakusi kuwana mukana wekudzidza Chirungu. Hazvina kumbononoka kunonoka kana mufaro wakanaka, chirevo chacho chinoenda, asi handizvo zvinogara zvakadaro. Mukana wekutanga wandinowana ndinozvipira pachangu kudzidza mutauro weShakespeare.
Mu hofisi mune kuverenga uye mabara iwe unogona kuverenga neyekutanga, yechipiri, yechitatu, zvisinei, zvinoita here kuti uite iyi mhando yekuverenga mureoffice writter pasina fudge yematanho akati wandei? kana uchigona nhamba 1 2 3 asi handizive kana paine hunyanzvi hwekukuisa iwe pekutanga, chechipiri, chechitatu ...
Ubuntu zvakare inomira kuve ne32-bit PPC kuvaka
LibreOffice inozivisa iyo nyowani MUFFIN interface yaNdira